တွေ့ဆုံပွဲ တက်လာတဲ့ ဒါ့ပုံထဲက လူတွေ ဘယ်သူတွေလဲ ??? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » တွေ့ဆုံပွဲ တက်လာတဲ့ ဒါ့ပုံထဲက လူတွေ ဘယ်သူတွေလဲ ???
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jul 23, 2013 in Myanmar Gazette | 46 comments
ဒုတိယအကြိမ် ဂဇက်ကွန်ဖရင့် တက်လာသူတွေ (အကုန်မဟုတ်)
ကိုင်း … ကိုင်း …
ပွဲ မတက်တဲ့ လူဒွေနဲ့ မမြင်ဖူးတဲ့ လူဒွေ ဒီပုံထဲက ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ပြောပြမယ် … နားထောင်ဂျ ….။
ညာမှဘယ် ကို သွားမယ်နော် …။
ပထမဆုံး ရှေ့ဆုံးမှာ တစ်ယောက်တည်း ငုတ်တုတ်လူက ကိုအာဂ လို့ ခေါ်ဘာဒယ် ….။
ပြီးရင် … ဟိုးး ညာဖက်ဆုံးက ခရမ်းရောင် အိန်းဂျီနဲ့ အညိုးသမီး ကနေ စပြောမယ် …။ သေဂျာ ကြည့်ဂျ။
ရေငါး (WaterFish)၊ အန်တီမှီ (Hmee)၊ ကျုပ်ရဲ့ မတော်ရတဲ့ ယောက်ခမ မနိုဗွီ (Novy)၊ အန်တီအိ (MaEi)၊ အန်တီပဒုမ္မာ (Padonmar)၊ အန်တီနီလာစိန်၊ ဦးဦးပါလေရာ၊ ဘဖော (Foreign Resident)၊ ဦးကြီးမိုက် (Kyeemite)၊ ဦးစွယ်တော်ရွက် (Swal Taw Ywat)၊ ဦးနွေဦး
အောင်ရဲလင်းနဲ့ မတူတဲ့ အလင်းဆက်၊ ဒက်ဒီတိုက် (ရွှေတိုက်စိုး)၊ ရွှေတိုက် နောက်ကပ်လျက်က သိကြားမင်း (Mr.Marga)၊ ဦးဆာမိ (Surmi)၊ မောင်ဘလှိုင်၊ မျက်မှန်နဲ့ ဦးလေးကြီးက ကိုမျိုးသန့်၊ အိန်းဂျီ အနီနဲ့ အန်တီက အန်တီဆူး၊ ဒီဘက်က အန်တီဝေ (Wei Wei)၊ ဘေးက အန်းတီ အဖြူနဲ့က မမိုချို၊ အိန်းဂျီ အနက်နဲ့က မအိတုံ (Etone)၊ ဘေးက ငြိမ်းငြိမ်း (Nyein Nyein)၊ မနွယ်ပင်၊ လုံမလေး မွန်မွန်၊ မရွှေအိ (Shwe Ei)၊ မဂရင်းရို့စ် (GreenRose)၊ လူကလေး၊ ဟိုဘက် တစ်ယောက်ကတော့ ပြတ်နေလို့ ဘူမှန်း သိဝူးဂျာ …။
အိန်းဂျီ အနက်နဲ့ ရီကျဲကျဲ လုပ်နေတဲ့ လူက ရွာ့သူပုန် ကိုရဲစည်၊ သူ့ဘေးက ၊ မမိုချိုနဲ့ မအိတုံရဲ့ နောက်က ဒေါက်ဒေါက်ကြီး AKKO၊ သူ့ဘေးက ကော်ဘရာ ဖြစ်မယ်ထင့် ….။
အမတ်မင်းရယ်၊ မှော်ဆရာရယ်၊ ကိုကောင်းကင် တို့ကတော့ ကျန်နေသေးတယ် …။ ဦးခင်ခကြီးက ခဏပဲ လာသွားတယ်။ ကိုအောင်မိုးသူ က ဝါးဒီးပီးတော့ ပြန်သွားတယ်။ လောလောဆယ် ဂလောက်ပါပဲ။
မရှင်းရင် အခမ်းအနားမှူး ကျုပ်ဒက်ဒီ တိုက်ကိုသာ မေးဂျဘာကုန်လော့။
သူ့ဘေးက = အံစာတုံး
လူနဲ့နာမည်တွေနဲ့တွဲသိသွားတော့ လမ်းတွေ့ရင် အကူအညီတောင်းလို့ရတာပေါ့.. ကျေးဇူးပါ..
ခရစ်စတယ်လေး.. ဒို့ကို မမြင်ဖူးဘူးထင်တယ်… ဒို့လေ.. ဒို့
ခရစ်စတယ်လေး.. အကူအညီလိုတာနဲ့ သိအောင် ကိုရင်စည်သူနာမည်ကို နဖူးထိပ်ကော..
ခြေသလုံးမှာပါ တက်တူး ထိုးထားတယ်… တွေ့တာနဲ့ အကူအညီတောင်းနော်.. မတွေ့လဲ ဖုန်းဆက်တောင်းလို့ရတယ်..
ဒီက ဘွတ်..အဲ့.. ပဲ…
သြော် ငါ့ ဂဇက်မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာ ယောက္ခမကြီးလို့ ခေါ်သွားတဲ့သူ
ခုမှမိပြီ ၊ ငါ့သားကို မြင်လို့ ခေါ်တာထင်ပါရဲ့ ၊
ငါ့သားကလည်း အနက်ဝတ်လာ ၊ သူကလည်း အနက်နဲ့ဆိုတော့
အောင်ရဲလင်းနဲ့ တူတဲ့အလင်းဆက် လုိ့ပြောပါဟ
ချောတယ် လို့ ပြောပေးပါ့မယ်ကွယ်။
သူ့ဘေးက …. ဆိုတာနဲ့တင်။
ပွဲကိုခဏရောက်ချိန် လှိုက်လဲစွာနှုတ်ဆက်ကြတဲ့ ဦးပါလေရာ၊ ဦးကြီးမိုက်၊ ဦးဆာမိ၊ ဦးစွယ်တော်ရွက်၊ ကိုအမတ်မင်း၊ ကိုရွှေတိုက်စိုး၊ ကိုမဟာရာဇာ အံစာတုံး၊ မောင်မာဃ၊ ငြိမ်းငြိမ်း၊ ရေငါး၊ လုံမလေးမွန်မွန် နှင့် လူကလေး တို့အား ကျေးဇူးပါဗျ၊
ပွဲတက်လာသော အခြားရွာသူားများ ခင်ခ အခြားကိစ္စလေးရှိလို့ အချိန်မရတဲ့အတွက် စောင့်ဆိုင်းကာ မနှုတ်ဆက်ခြင်းကို တောင်းပန်လျှက်ပါဗျ။
လေးခ ကို မဆုံ ဆုံအောင် တမင် ချောင်းထားရတာ
(ဒါမှ လက်မှတ် ရမှာကိုး )
မင်းသမီးန၀ရတ်ကားကို… ဒီနှစ်အယ်လ်အေမြန်မာရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြဖို့.. မြန်မာရုပ်ရှင်ပွဲသွင်းတဲ့အသင်းက.. ရွေးထားပါတယ်..
နောက်ဆို… မင်းသား/မင်းသမီးတွေကို.. ယူအက်စ်မလာခင်.. ဂဇက်ပွဲတက်သွားဖို့.. ညွှန်းမှ…
သဂျီးရေ လူများဘူးဆိုတာ မိုးတွင်းကာလ ရန်ကုန်မှာ မိုးတွေ ဖွဲလိုက် သဲလိုက် တိတ်လိုက် အချိန်အခါ ဖြစ်တဲ့ဂျုလိုင်လအခါရယ်၊ ပြီးတော့ အခုကျင်းပတဲ့ ရက်က အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့ အာဇာနည်နေ့ရယ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နဲ့ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ စတဲ့ ပိတ်ရက်ဆက် ၄ ရက်မို့ တစ်ချို့တွေက ခရီးသွားကြတာရယ် ကြုံသွားတာရယ် ၀ါဆိုလပြည့်ရက်နဲ့ကပ်နေတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစု ၀ါဆိုသင်္ကန်း ကပ်အလှုတွေ အချိန်မှီလုပ်ကြတာမို့ရယ်ကြောင့် ဖြစ်မှာပါ။
ပထမကြိမ်ပွဲက ပွင့်လင်းရာသီဆောင်းအခါမို့ နဲ့ ဦးဆုံးတွေ့ဆုံပွဲမို့ ပိုလည်းစိတ်ဝင်စား တက်ရောက်ဖြစ်ကြတယ် ထင်ပါရဲ့ဗျာ။
တကြီးရယ်.. မင်းသားမင်းသမီးတွေ လာပါတယ်ဂျာ…
ဟိုဘက် ညာအစွန်က အင်္ကျီအဖြူနဲ.ဟာ မင်းမော်ဂွန်း လေးဂျာ…….တေတေချာချာကြည့်. ခိခိခိ
ဟယ်။ မင်းမော်ကွန်း လေထိုးလေးတော်။
မင်းမော်ဂွမ်း… မိန်းမရလို့ ဂွမ်းသွားပြီ…
ခိခိ ဒီတခေါက်လူပိုများမယ်ထင်လို့…..ရေးပေးပါ ဗီနိုင်းပေါ်က ကွန်မန့်ကို
ခြေဖျားထောက်နေတဲ့ သူကရော ..ဘယ်သူတုန်းဗျ..
ရွာသူားများရဲ့ ဓာတ်​ပုံနှင့်​တကွ အမည်​များကို​ဖော်​ပြ​ပေးတဲ့ ညီ​လေးအံစာတုံးကို​ကျေးဇူးတင်​ပါ​တယ်​။
ငြိမ်းငြိမ်းကို တွေ့တိုင်း အခြားသူနဲ့ အမြဲမှားတယ် … တကယ်တော့ လူနဲ့နာမည်နဲ့ မတွဲမိတာ..
မဆုံဘူးတဲ့ မနီလာစိန် ၊ မမှီ ၊ မိုချို ၊ ကိုမျိုးသန့်၊ ကိုခင်ခ ၊ ကော်ဘရာ၊ ကောင်းကင်၊ မှော်ဆရာ တို့နဲ့ ဆုံရတာလဲ ၀မ်းသာမိတယ်။
၀မ်းလဲဝ .. (နှစ်ခါထည့်စားတာ)
မ၀ယ်ကျွေးလည်း ရပါတယ်။ ၀ယ်ကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့။
မုန့်ဝယ်ကျွေးရင်လည်း လူမှားပြီး မကျွေးနဲ့ဦးနော် ဦးပါ……..
အားလုံးကိုတွေ့ဘူးသွားပြီ နောက်လမ်းတွေ့လို့ကတော့ မုန့်ကျွေးခိုင်းမှာ လုံမလေးမွန်မွန်တို့ အလင်းဆက်တို့ သတိသာထား ထွက်ပြေးလို့ကတော့ သဂျီးနဲ့တိုင်ပြောမှာ
မုန့် ကျွေးဖို့ ..လူရွေးလိုက်တာ…
လုံမလေးနဲ့ .. အလက်ဆင်း..ပဲလား..။
အောင်ရဲလင်းနဲ့ ..တူတယ်ပြော ရင် ပြီးတာပဲ
မုန့်ကျွေးရတာက ပြဿနာမရှိ ။
အယ်..တွေ့ရင် မုန့်ဝယ်ကျွေးမယ်ဟုတ်လား.. ဟိဟိ..ကျေးဇူးပါ..
စိတ်ကူးနဲ့ပဲ…. ပုံဖေါ်ကြည့် နေရတယ်ဗျို့ ……။
မြင်ဖူးသူတွေကိုထပ်မှတ်မိအောင်ကြည့်သွားပါတယ်။ မမြင်ဖူးသူတွေကိုလဲမှတ်မိအောင်အလွတ်ကျက်ထားပါ တယ်။ ဒါမှလမ်းတွေ့ရင် အတင်းနှုတ်ဆက်ပီးမုန့်ကျွေးခိုင်းမို့။ လောလောဆယ်တော့မဝေကျေးဇူးနဲ့ စာအုပ် ကလေးရလို့ပျော်ရပါတယ်။
ဦးဆာမိက နန္ဒာလှိုင်အမျိုးသားနဲ့ရုပ်ဆင်တယ်.. ဦးပါလေရာနဲ့ ဦးကြီးမိုက်ကိုမှန်းတာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်..
ခရစ်စတယ်လေးဂ ဦးကြောင် အိမ်မက်ထဲက ရီးဂျားဂလေးနဲ့ တူတယ်…. ထပ်ပေါမယ်.. တူတာဟုတ်ဖူး.. တကယ်ကို ဟုတ်နေတာ… ဦးကြောင်ကိုရော အိမ်မက် မက်ဖူးလားဟင်.. နောက်တပွဲကြရင် ခရစ်စတယ်လေး ပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပီး အုပ်စုဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံမယ်…. နောက်တပုံဂ ခရစ်စတယ့် ရင်ခွင်ထဲမှာ…. အဟင့် သိပ်ဖက်မထားနဲ့ကွာ… အသက်ရှုကြပ်တယ်… သူသိပ်ကဲတာပဲ….။ ဒါနဲ့ အန်တီနိုဗွီဆိုတာ လေကံစမ်းမဲပေးတဲ့ ဂျီးဒေါ်လား…. လက်မငါးဆယ် ဖလက်အယ်စီဒီ ဆိုနီတီဗွီဂျီး ပေါက်တယ်ဆို….
ဒါ့ပုံတွေ လုပ်ဂျဘာအုံးဂျ ….
ဒီမှာ မဖြစ်ညစ်ကျယ် တစ်ပုံတည်းကို အားမလိုအားမရ ကိုးကားနေရဒါ …
ဒါ့ပုံတွေ ချိဒဲ့လူဒွေ .. ကျုပ်မေးလ်ကို ပို့ဂျဗျာ …
ကျန်ဒဲ့လူဒွေ ကျိရအောင် တင်ပေးမယ် …
ကျုပ်မေးလ်က anzartone@gmail.com ဒါပဲ ….။
ပလိ … ပို့ပေးဂျ …. အာဟ .. အာဟ …
အနော့မှာ ချိတယ် ။။ ယူချင်တယ် ဟုတ် ….
ခုပုံက အနော်လဲ ပါဘူး ..
အနော်တို့မိသားစုက လာတာတောင် အသံမပေးဘူးနော်… နေနိုင်တယ် တော်ပြီ ခေါ်တော့ဘူး။ ချိတ်ချိုးတယ်…
တားတားပုံ …ပါတဲံ့ပုံတွေ ..အားလုံးရော..
ဂဇက် အဖွဲ့ ဝင်အားလုံး…ပါတဲ့ ပုံတွေရော..
တော်သေးတယ် ………အန်တီဂျီး မဖြစ်တွားလို့…ခိခိ
မယ်နိုဗွီ လူတွေတောင်မှားလို့ပါဗျာ ကျုပ်မှာမြင်ဘူးသလိုလိုဆိုပြီးကြည့်လိုက်ရတာ။
ရွာထဲကလူတွေကို အတော်များများတွေ့ဘူးပြီထင်နေတာ ကျနော်မတွေ့ဘူးသူတွေအများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်ဆိုတာ ခုမှသိရတော့တယ်။
ခေါ်မယ် ပြောမယ် လမ်းမှာတွေ့ရင် ပိုက်ဆံချေးမယ်.. အဲ နှုတ်ဆက်မယ် နော်..
ကျေးကျေး မောင်အံ ရေ။
အားလုံးပဲ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်…။ အန်တီပဒုန်မာ ကိုတော့ MYiA ဓါတ်ပုံပြပွဲနေ့ ကတွေ့ဖူးတယ်..။ နှတ်မဆက်လိုက်ရဘူး..။ ပြန်သွားတော့မှ သိတာ..
အဲဒီနေ့က ဓာတ်ပုံပြပွဲလုပ်တဲ့ ကလေးတွေကို ရိုက်ထားတဲ့ပုံရှိတယ်။
လူပုံတွေ မတင်ချင်တာနဲ့ ပို့စ်ထဲမထည့်တာ။
We R One ကို ပြန်ရှာကြည့်အုံးမယ်။
ဆရာ ကိုပါ နဲ့ ဆရာ ကို ဖေါ ကို ကြည့် ပြီး အံ့သြော နေ ပါ တယ် ။
လူ ငယ် တွေ ဘဲ ရှိ သေး တာ ကိုး ~~~
အား လုံး နုပျို ချော မော လှပ ကြ ပါ တယ် ။
အား လုံး ရွှင် လန်း ချမ်း မြေ့ ကြ ပါ စေ ~~~
ကိုဖေါက ကျွန့်တော့် ညီ အရွယ်ပေါ့..
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုပေါ်ဦး ရဲ့ ညီ အရွယ်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်…
ဂဇက်ထဲက ညီအကို တွေလို သဘောထားပါနော..
ဂဂ ကို မိန်းကလေး တစ်ယောက်လို့ မှတ်လို့။
မနို ကိုလဲ မမှတ်မိ လိုက်ဘူး။
.. ကလေးတွေပုံမပါလို့… မေးချင်နေတာ…
နောက်ဆို… ကလေးပိပိတို့တတွေကို… နေရာပေးပါကွယ်…
မဲဖောက်လက်ဆောင်ကိုလည်း.. ကလေးတွေအတွက်ထည့်ပို့ပေးဖို့.. တေးထားလိုက်ပါကြောင်း…။ :hee:
ကလေးလေးတွေကို ခေါ်ပါတယ် သူကြီးရယ်။
ကိုမျိုးသန့်သား ကောင်းကောင်းကလည်း ရှက်နေတယ်။
မှီ့သားလေးကလည်း သူငယ်ချင်းမွေးနေ့သွားမယ်ဆိုပြီး အတင်းပြန်မယ်လုပ်နေလို့ သူ့အဖေ ဂျူးမလေးချီပြီး ထွက်ထိန်းနေရတယ်။
မှီ့ကိုတောင် ဂရုပုံရိုက်ဖို့ အတင်းဆွဲထားရတာ။
မှော်လေဒီ နဲ့ မှော်သားသားလေးက ခေါ်လို့ကိုမရ။
နောက်တစ်ခေါက်ဆို ရွာထဲ ကလေးတွေ တိုးမှာတော့ အမှန်။
အခုလိုလေးတွဲသိရတော့ပိုရှင်းတာပေါ့ ကျေးကျေးပါအေ :hint: